Iprofayile yenkampani - iShenzhen Antmed Co., Ltd.
Isiteshi esinye seTransducer
Isiteshi seTransducer esiBini
Isampulu yeTransducer yeSampulu
Izinto ezisebenzisa iMifanekiso yoNyango
YeBayer / Medrad
I-CT-Guerbet / iMallinckrodt
I-CT-Bracco / Acist / i-EZEM
UMnu-Guerbet / Mallinckrodt
I-Angio-Bayer / iMedrad
I-Angio-Guerbet / iMallinckrodt
Ingcinezelo High Tube
Ukusetyenziswa kwezinto ezininzi
Isirinji yokusetyenziswa okuninzi
Ukusetyenziswa kweTyhubhu emininzi
Umahluko weMithombo yeendaba
CT Injector enye
I-CT ezimbini ezi-Injector
Iimveliso zentliziyo kunye neMveliso yePheripheral
Isixhobo sokunyuka kwamaxabiso
Umgca woxinzelelo oluphezulu
I-Shenzhen Antmed Co., Ltd. igxile kuphando nakuphuhliso, ukuvelisa, ukuthengisa kunye nenkonzo yezixhobo zonyango ezihambele phambili kwezobuchwephesha, iimveliso ezo zigubungela i-imaging yezonyango, i-cardiovascular and peripheral surgery encinci, i-anesthesia, ukhathalelo olunzulu namanye amasebe.
U-ANTMED uyinkokeli yentengiso yasekhaya kwisirinji yoxinzelelo oluphezulu kunye nakumacandelo eshishini elinoXinzelelo loXinzelelo. Sibonelela ngesisombululo esimileyo se-CT, i-MRI kunye ne-DSA yokufaka inaliti yemithombo yeendaba, izinto ezisetyenziswayo kunye noxinzelelo lwe-IV catheters. Iimveliso zethu zithengiswa kumazwe angaphezu kwe-100 kunye nemimandla efana neMelika, iYurophu, iAsia, iOceania kunye neAfrika.
Ngokunyanzelwa kwisiseko "soMgangatho bubomi", u-Antmed wayeseke iNkqubo yoLawulo loMgangatho ngokweemfuno ezivela kwi-EN ISO 13485: 2016, 21 CFR 820 kunye nommiselo ohambelana nawo ovela kumalungu eNkqubo yoPhicotho zincwadi eziNye (MDSAP). Inkampani yethu inesiqinisekiso se-EN ISO 13485 QMS, isiQinisekiso se-MDSAP kunye ne-ISO 11135 ye-Ethylene Oxide service sterilization for Certification yezixhobo zonyango; Sikwafumene ubhaliso lwe-USA FDA (510K), Canada MDL, Brazil ANVISA, Australia TGA, Russia RNZ, South Korea KFDA kunye namanye amazwe. UAntmed unikwe iwonga lomgangatho wonyaka wekhredithi yodidi-Umenzi wezixhobo zonyango kwiphondo laseGuangdong iminyaka emithandathu ilandelelana.
I-ANTMED yiShishini leSizwe le-Hi-Tech elinamandla ophuhliso kwimveliso, ukuvelisa ukungunda, imveliso enkulu, intengiso esebenzayo yasekhaya nakwamanye amazwe, kunye nokubonelela abathengi ngeenkonzo ezongezwe ngexabiso. Siyazingca ngempumelelo yethu kwaye sizama ukwenza igalelo elihle kutshintsho lwezonyango lwase China kunye nehlabathi jikelele kumzi mveliso wase China ophakathi ukuya phezulu. Injongo ye-ANTMED yexesha elifutshane kukuba yinkokeli kushishino lokucinga olwahlukileyo lwehlabathi, kwaye umbono wexesha elide kukuba ube yinkampani ehlonitshwayo kwilizwe liphela kwishishini lezixhobo zonyango.
Ukuba yinkampani ehlonitshwayo kwihlabathi liphela kushishino lwezixhobo zonyango.
Gxila kwimveliso yokusika kwinqanaba elitsha kwezonyango.
Ukuba ngumsebenzi wokuziphatha kunye noxanduva Oko kuyabaxabisa abasebenzi bethu kwaye kukhule namaqabane ethu.
Ukuseka i-QMS ejolise kubathengi ukubonelela ngemveliso esemgangathweni kunye nenkonzo.
18 Jinhui Ave., Isithili esitsha sasePingshan, eShenzhen, 518122, China
Ifowuni: +86 0755-86060992
1ML / 3ML Isirinji yokugonya
Ngayo nayiphi na imibuzo, siya kuphendula kwiiyure ezingama-24.